Si Aad Kor Ugu Qaado Kalsoonida Xaaskaagu Kugu Qabto Fuli 6-daan Qodob - Daryeel Magazine
Si Aad Kor Ugu Qaado Kalsoonida Xaaskaagu Kugu Qabto Fuli 6-daan Qodob
1)xaaskaaga ugu yeedh magacba magaca uu ka wacan yahay, arintaasina waxa ay wax wayn ka tartaa kalsoonida iyo niyad wanaaga xaaskaaga.
4) ha noqon kaligii taliye ka dhigo xaaskaaga la taliye sare oo go’aanka kula qaadata dareensii in uu idinka dhexeeyo talo wadaag iyo wax isku sheeg. Sidoo kale aamin fikradeeda una mahad celi markasta oo ay kuu soo bandhigto fikrad lagu hurumari karo.
5) hakala bakhaylin xaaska dhoola cadayn, mahadcelin, Iyo in aad caawiso xilligi shaqada guriga ay ku guda jirto.
6) kala tasho arimaha guriga gaar ahaana waxyaabaha aasaasiga ah ee looga baahanyahay guriga gudihiisa waxa laga yaabaa in ruuxa dumarka ahi ay ka xishooto in ay ku waydiiso qaybo kamid ah baahiya gaarka ah ee guriga si aad taag uga hortagto isku day in aad waxa ka ogaato waxa gurigu ubaahanyahay ee laga yaabo in ay xaaskaagu kaala gabanayso.
6 Qodob Oo Cimri Degdeg Laga Qaado Ka Fogoow Hadii Aad 7-daan Astaamood Ku Aragto Gabadha Aad La Haasawdo Sidee Uur Lagu Qaadi Karaa? Waqtigee Se Ugu Fiican?